Turkiga oo dib u bilaabaya lacag uu siin jiray dowladda Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Turkiga oo dib u bilaabaya lacag uu siin jiray dowladda Soomaaliya
Ankara – Mareeg.com: Wasaaradda arrimaha debadda Turkiga ayaa sheegtay iney lacag lagu kabayo miisaaniyadda dowladda Soomaaliya ay sanadkan 2014 siin doonto dowladda, iyadoo beenisay in la joojiyey dhaqaale Turkigu siinayey dowladda Soomaaliya.
War qoraal oo kasoo baxay Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa lagu beeniyay in Turkiga uu jaray lacagahaas, waxaana lagu sheegay in dhowaan dib loo bilaabayo bixinta lacagahaas.
“Waxaan ka shaqaynaynaa qorshahe deeq lagu siinayo Soomaaliya sanadka 2014, taasoo qeyb ka ah taageerada guud ee Turkigu siinayo Soomaaliya” ayaa lagu yiri war kasoo baxay wasaaradda arrimaha debadda Turkiga oo uu soo xigtay wargeyska World Bulletin.
Sarkaal ka tirsan Wasaaradda arrimaha dibadda oo magaciisa ka gaabsaday ayaa dhowaan Wakaaladda wararka Reuters u sheegay in lacagaha Turkiga siin jirtay Soomaaliya la joojiyey dhamaadkii sanadkii hore ee 2013.
Sidoo kale Masuul ka tirsan Dowladda Federaalka ayaa xaqiijiyey joojinta lacagahaas isla markaana sheegay in ay socdaan wada hadalo sidii dib loogu bilaabi lahaa bixintooda.
Wasaaradda arrimaha debadda Turkiga ayaa sheegtay in dowladda Turkigu Soomaaliya lacago kaash ah bilhii June ilaa December 2013, taasoo la sheegay iney ku timid codsi ka yimid madaxweyne Xasan Sheekh.
Sida uu horay u sheegay gudoomihii hore ee Baanka Dhexe ee Soomaaliya Cabdi Salaam Cumar Hadliye oo la hadlay Reuters, Turkiga ayaa bil walba siin jiray Dowladda Federaalka lacag gaaraysa $4.5 milyan doolar.
Turkey denies cutting off aid to Somalia
Raysul Wasaare Cabdi Weli oo la kulmaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti